सुगर भनेको उसिनेको चामल खानु पर्ने रोग होइन, सबै कुरा खान सकिन्छ (भिडियाे कुराकानीसहित) - Nepalese Times
राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भए वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्मकट्टेलले गरे यस्तो प्रस्ताव ! 57 मिनेट अघि
सुगर भनेको उसिनेको चामल खानु पर्ने रोग होइन, सबै कुरा खान सकिन्छ (भिडियाे कुराकानीसहित)
नेप्लिज संवाददाता १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०७:०८ (4 महिना अघि) ६४९ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । आम मानिसमा सुगर भनेको उसिनेको चामल खानु पर्ने रोग हो भनेर बुझ्छन् । तर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपक भारी यो गलत रहेको बताउँछनन् ।मान्छेहरूको हल्लाको पछि भाग्ने बानी रहेकोले अनावश्यक मुख बार्ने गरेको उनले बताएका छन् ।
बिरामीहरूलाई सुगर भएको छ भने पनि खान नहुने भन्दै उनले तर, बोसो, चिल्लो, गुलियो कसैले खान नहुने बताए । धुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपक भारीसँग सेताेपाटीले कुरा गरेकाे छ । उनकाे याे कुराकानी सबैका लागि सन्देशमूलक हुन्छ भनेर हामी साभार गरेका छाैँ ।
के खानेभन्दा पनि कति खाने भन्ने महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सुगर भन्नासाथ चिनी, भात र आलु खान नहुने रोग नभएको बताएका छन् । हामीले खाएका खानेकुरा पेटमा गएर बन्ने चिनी नै भएकोभ भन्दै उनले रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुनु भनेको चिनी बढी उत्पादन भएको नहुने बताए । त्यो खाएको खानेकुरा खेर गएको भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।
डाइभिटिज थाइराइड उपचार केन्द्र कुपण्डोलमा कार्यरत मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपक भारी प्राकृतिक खानेकुरा जे खाँदा पनि हुने बताउँछन् । दाल, भात, तरकारी, दूध, दही, मोही, सागसब्जी, मासु र फलफूल जे खाए पनि उनले उनले बताए ।
सामान्य बुझ्नु पर्ने हुरा चाहीँ केही पनि बढी खान नहुने भन्दै उनले बिरामीहरू मैले चिनी, चामल खाएको छैन भन्ने गरेको बताए । बिरामीहरुले उसिनेको चामल खान्छु भन्ने गरेको भन्दै उनले तर जतिसुकै सुगर प्रेसर बढे पनि रक्सी खान नछाड्ने गरेको बताए ।
उनले भने – ‘ हामी गलत कुराको पछि लाग्छौं। कुनै पनि खानेकुरा एकै पटकमा धेरै खान भएन, पटक पटक गरेर खाने तर धेरै नखाने।’
‘हाम्रो देशमा सुगरफ्री चामल, दाल, जुस, मिठाइ र सेलरोटी पाइन्छ। यस्तो किन जरूरी भयोर ? एक दिनमा सय ग्राम फलफूल खाँदा केही हुँदैन।’ उनले भने ।
सुगर भनेको उसिनेको चामल खानु पर्ने रोग नभएको भन्दै उनले सुगर भएकाले यो खाने, यो नखाने भनेर छुट्टाउनु गलत र भ्रम भएको बताए ।
एक चम्चा चिनी खाँदैमा केही नबिग्रने भन्दै उनले होटलमा भस्म खाने, चिल्लो खाने, रक्सी पिउने तर सामान्य दालभात किन नखाने ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
सुगर रोगबारे मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपक भारीसँगको भिडियो कुराकानी हेरौँ । सेतोपाटीबाट